သတင်းသမား ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘာလုပ်ကြမလဲ ~ Htet Aung Kyaw
8:31 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
ထက်အောင်ကျော်|October 31, 2014 | ဧရာဝတီ။
အလွတ် သတင်းထောက် ကိုပါကြီး အသတ်ခံရမှု အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ရေး အတွက် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများက အေက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
အလွတ်သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်နိုင် ခေါ် ကိုပါကြီး အသတ်ခံရမှုကို လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူပေးဖုို့ ၈၈ မျိုးဆက်အပါဝင် လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့စည်းတွေက ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆုိုကြတာ သတင်းတွေထဲ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား သတင်းစာအဖွဲ့စည်းတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်အဖွဲ့စည်းတွေက အဲဒီလုိုတောင်းဆုိုတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အတုိုးတက်ဆုံးနေရာဟာ မီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောထားတဲ့အချိန်မှာ သတင်းထောက်ကုို ဘာကြောင့်သတ်တာလဲ။
ဒီလုိုသတ်ဖြတ်မှုအပေါ် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဖွဲ့စည်းတွေက ဘာကြောင့် မဝေဖန်ဘဲ ငြိမ်ခံနေကြတာလဲ။ နိုင်ငံတကာရှိ သတင်းသမား ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဖွဲ့တွေကရော မြန်မာသတင်းထောက်တွေရဲ့ အခြေအနေကုို အရင်လုို အလေးထားပါသေးရဲ့လား။
ဒီအကြောင်းကို သိချင်တဲ့ကျနော်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းသမားများ သတ်ဖြတ်ခံရမှု တားဆီးရေး နိုင်ငံတကာနေ့ (The International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) ဆွေးနွေးပွဲဆီ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Fritt Ord (လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်) အဖွဲ့က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ယူနက်စကို ဌာနေကုိုယ်စားလှယ်က အဖွင့်စကားပြောပြီး နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဌာမှ ဒုဝန်ကြီး၊ ဥရောပ သတင်းစာဆရာများ အသင်းမှ ကုိုယ်စားလှယ်တဦးနဲ့ နော်ဝေ ဂျာနယ်လစ်သမဂ္ဂ၊ နော်ဝေ စာရေးဆရာအဖွဲ့၊ နော်ဝေ သတင်းစာအသင်း၊ နော်ဝေ အယ်ဒီတာအသင်းက သတင်းသမားတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ ၆၀ ခန့် တက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
နုိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဒီနိုင်ငံတကာနေ့ကုို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖုို့ရှိ မရှိတော့ မသိရသေးပါ။
ဒီပွဲမှာ အဓိက ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာက ဥပရောတုိုက်အတွင်းက သတင်းသမားတွေရဲ့ အခြေနေဆုိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကုိုပါကြီးကိစ္စ တင်ပြဖုို့ အခွင့်မသာဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ခဏနားချိန်မှာ ဥရောပ သတင်းဆရာအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ဝီလျံ ဟော်စလေ (William Horsley) ဆီသွားပြီး နော်ဝေရောက် မြန်မာတွေက နော်ဝေအစိုးရဆီ ပုို့ထားတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို သွားပေးမိပါတယ်။
“ခင်ဗျားတုို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမုိုကရေစီ ပြုပြင်ရေးလမ်းကြောင်းကုို အနောက်နိုင်ငံတွေက စံပြအဖြစ်တောင် ဥပမာ ပေးနေကြတာပဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလုိုဖြစ်နေရတာလဲ’’ လုို့ သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ဆွေးနွေးနေတယ်ဆုိုတော့ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး အနောက်တိုင်း သတင်းစာဆရာတွေက နားလည်ထားတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ဆုိုလုိုတာက မြန်မာ့အရေးဟာ ကမ္ဘာ့သတင်းလောကက စိတ်ဝင်စားတဲ့အရေး မဟုတ်တော့ပါ။ ဆီးရီးယားနဲ့ အီရတ်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့၊ သတင်းထောက်တွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်နေတဲ့ ISIS အရေးက သူတုို့အတွက် အဓိကဖြစ်နေပြီ။ ယူကရိန်း အရှေ့ပုိုင်းပြသာနာက ဒုတိယနေရာ ယူထားပါတယ်။ နောက် ပါလက်စတုိုင်း၊ အစ္စရေး တုိုက်ပွဲ စသဖြင့်။
မြန်မာ့အရေးကို တိုက်ရိုက် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ သူတုို့ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မြန်မာ သတင်းသမားတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားဖုို့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ သတင်းသမားတွေကုို ဘယ်လုို မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးသလဲ၊ ဘယ်လုို အလုပ်ခန့်သလဲ၊ လုံခြုံရေးတာဝန်၊ အသက်အာမခံကြေး ဘယ်လို လုပ်ပေးသလဲ။ ပြီးတော့ ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်စားလှတဲ့ အလွတ်သတင်း ထောက် (Freelance Journalist) တွေရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုံခြုံရေးအကြောင်း။
တခါ ကမ္ဘာ့ဒေသတချို့က သတင်းသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအကြောင်း အော်စလို တက္ကသိုလ်က သုတေသလုပ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သတင်းသမားတွေ အစုအပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှုအကြောင်း ဗီဒီယို မှတ်တမ်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းထောက်ကို သတ်သူက အစိုးရတပ်ဖြစ်နေပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ ခွဲထွက်ရေးသူပုန်တွေ၊ မာဖီးယားဂုိုဏ်းတွေ ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
သုတေသီ မာတီ ဟားဗစ်ခ် (Marte Havik) ရဲ့ တွေ့ရှိချက်အတိုင်းဆိုရင် သတင်းဌာနတခုအတွက် အဓိက စိန်ခေါ်ချက်ဟာ ငွေကြေးနဲ့ တခြားကိစ္စတွေ မဟုတ်ဘဲ သတင်းသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာ သတင်းယူမယ့် သတင်းထောက်တွေအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း၊ လုံခြုံရေးသင်တန်း၊ အသက်အာမခံတွေကို အသေအချာ လုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ သူမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်တွေက ပြောတယ်လို့ ဆုိုထားပါတယ်။
ကျနော်တုို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော သတင်းသမားတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး သုတေသန လုပ်တာမျိုး ရှိပါရဲ့လား။ တက္ကသိုလ်တွေမှာ မီဒီယာဌာန အသေအချာ ရှိပါရဲ့လား။ ထားတော့။ ဒါတွေက အစိုးရဘက်က တာဝန်ယူရမယ့် အပိုင်းပါ။ သတင်းသမားတွေ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်တုို့၊ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) တို့မှာရော သတင်းသမား ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှိပါရဲ့လား။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် သတင်းသမားအခွင့်အရေး တိုးတက်လာတာမျိုးတော့ မတွေ့မိသေးပါ။ လောလောဆယ် သတင်းထောက် ၁၀ ဦး ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်က ဂျာနယ်တွေကို တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ အခုတော့ အလွတ် သတင်းထောက်ကိုပါ ပစ်သတ်တဲ့အဆင့်အထိ ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ န၀တ၊ မဆလ ခေတ်ထက်တောင် အခြေနေက ပိုဆိုးသွားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
တခါ သတင်းထောက်အခွင့်ရေးကို ပြောမယ်ဆုိုရင် ပြန်ကြားဌာနတခုတည်းနဲ့ မဆိုင်တော့ဘဲ အလုပ်သမားဌာနတုို့၊ အခွန်ဌာနတုို့ အပါဝင် ဌာနအတော်များများနဲ့ ဆက်စပ်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ သတင်းစာတုိုက်၊ ဂျာနယ်တုိုက်တွေ အများကြီးပေါ်လာပေမယ့် အဲဒီ သတင်းစာတုိုက်တွေဟာ ဘယ်လုို အဆင့်တန်းရှိရမယ်။ ၀န်ထမ်းဘယ်နှဦး ခန့်ရမယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကို ဘယ်လုိုအဆင့်တန်းနဲ့အညီ ထားရမယ်။ သတင်းထောက်တွေကို ဘယ်လုို လစာပေးရမယ်၊ ဘယ်လုို တာဝန်ခံရမယ်၊ အသက်အာမခံကြေး အပါအ၀င် သတင်းထောက်အတွက် လုိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု ရှိမရှိ ဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေ တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေသလဲ။
တခါ သတင်းထောက်တွေကို ဘယ်လို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးသလဲ။ အလွတ်သတင်းထောက်ကုိုရော ဘယ်လို သတ်မှတ်သလဲ။ အစုိုးရဆီ အခွန်ဘယ်လုို ဆောင်သလဲ။ အစုိုးရဘက်ကရော သတင်းထောက်တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးသလဲ။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ကိုယ်တုိုင်မှာရော တနိုင်ငံလုံးက သတင်းထောက်စာရင်း ရှိပါရဲ့လား။ စသဖြင့် စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ပေါ်လာပါတယ်။
အနှစ်ပြန်ချုပ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမုိုကရေစီ လုိုလားသူတွေ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် လုိုလားသူတွေဟာ ဒီမုိုကရေစီ အခွင့်ရေးနဲ့ သတင်လွတ်လပ်ခွင့်ကုို တောင်းဆုိုတာ အပြင် ဒီမုိုကရေစီတုိုက်ပွဲ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် တုိုက်ပွဲအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူတွေ၊ ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေ၊ ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် ဘယ်လုို တာဝန်ယူပေးမလဲ ဆုိုတာကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖုို့ လုိုလာနေပါတယ်။
အရင်က မစဉ်းစားဖြစ်ရင်တောင် အခုစဉ်းစားဖုို့ လုိုလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းကာစ သတင်းအဖွဲ့တွေ၊ မီဒီယာအဖွဲ့တွေဟာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် တောင်းဆုိုတာအပြင် သတင်းသမား ကာကွယ်ရေးအတွက် ဘာလုပ်ပေးကြမလဲ ဆုိုတာကိုပါ အသေအချာ စဉ်းစားဖုို့ လုိုလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလုို သတင်းအဖွဲ့ထဲမှာ မပါသေးတဲ့ သတင်းသမားတွေ၊ သတင်းစာတုိုက်၊ ဂျာနယ်တုိုက်တွေကလည်း ဒီအဖွဲ့တွေထဲ ၀င်ရောက်တာဝန်ထမ်းပြီး သတင်သမားကွယ်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အကူညီပေးနေပါတယ်ဆုိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်း သတင်းထောက်သင်တန်း ပေးဖုို့ချည်း လုပ်မနေဘဲ သင်တန်းပေးလုိုက်တဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖုို့ လုိုလာနေပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ ဘယ်လုိုရှိသလဲ။ လစာနဲ့ တခြား အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လို ပေးထားသလဲ။ အသက်အာမခံကြေး အပါအ၀င် ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရမှု အတွက် ဘယ်လုိုမူတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိသလဲ။ ဒါတွေကို အသေချာစဉ်းစားဖို့ လုိုပါတယ်။
အချိန်ယူလုပ်ရမယ့် အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေ မတုိုင်မီ အခုလောလောဆယ် ထလုပ်သင့်တာကတော့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နာမည်ကြီး သတင်းစာတုိုက်၊ ဂျာနယ်တုိုက်တွေ အားလုံး စုစည်းပြီးဖြစ်စေ၊ မစုစည်းနိုင်ရင်လည်း သီးခြားစီဖြစ်စေ အသတ်ခံလုိုက်ရတဲ့ အလွတ်သတင်းထောက် ကုိုပါကြီးအတွက် တစုံတရာထုတ်ပြောဖုို့ အရေးပေါ် လုိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။
October 31, 2014 at 9:17 AM Reply
နော်ဝေးရောက် မြန်မာအသုိုင်းဝုိုင်းမှ နော်ဝေးမီဒီယာများသုို့ ပေးပို့ထားတဲ့ စာ...။
As Burmese people living in Norway, we are very shocked and saddened by the killing ofawell-known journalist in our country. The shooting of Aung Kyaw Naing shows that, far from heading towards democracy, the Burmese government is continuing with gross and brutal human rights violations of its people.
His death this month has prompted massive strikes and protests in Rangoon, and in Mandalay. We are also surprised that we have seen no coverage of this in the Norwegian media, which normally reports on Burma. We have written to His Majesty King Harald, who is scheduled to visit our in December to draw his attention to the killing.
During the visit, the King will be accompanied by top Norwegian business delegates, as well as Kjell Magne Bondevik, head of The Oslo Center for Peace and Human Rights. We have written to the King, and others who will accompany him, requesting Norway to rethink its active support for the Burmese regime.
The Burmese government and military have been making many promises to the international community, and the Norwegian government have been wiping huge amounts of their debt and granting very generous loans. We are hoping that Norway, for so longasupporter of Burma in its long struggle for democracy, will not just think of profits and investments.
We want our country and people to enjoy the same levels of human rights and democracy enjoyed by the people of Norway. We are calling on the King and business delegates to raise the death of journalist Aung Kyaw Naing during their meetings with Burmese leaders in December.
Burmese community in Norway